Boulder ọ dị mma maka ịgba ígwè? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Boulder igwe - azịza na ajụjụ
Boulder igwe - azịza na ajụjụ
Boulder ọ dị mma maka ịgba ígwè?
Nkumebụ ebe pụrụ iche maka ndị ịnyịnya ígwè. IheNkumeNdagwurugwu nwere ihe karịrị kilomita 300 nke ụzọ ụgbọ okporo ígwè, gụnyere kilomita 96 nkeigwe kwụ otu ebelanes, 84 kilomita nke otutu ojiji, na 50 kilomita eweputaraigwe kwụ otu ebeụzọ gasị.
Anyị na-apụ ebe a na USA Cyclocross National Championship na dịka tupu m mara na a ga-enwe ụfọdụ ọgbara ọhụrụ na olulu, m lere ha niile anya ma gbalịa ịchọta ihe dị jụụ iji gosi gị ụmụ okorobịa na ọ nọ ebe a Ọsọ asọmpi mba na-eme nke ọma ebe a ka m nọ na TannerCole Breath onye na-ahazi etinyerịrị ma nwee nnukwu UCI na ngwụcha izu na steeti otu n'ime ọkachamma agbụrụ m nwere ị nwere ihe dị jụụ ebe a ihe anyị na-eme ka ị mara agbụrụ ọ bụla ị ga-eme ka igwe kwụ otu ebe gị chọ iji nwee obere mgbatị na obere tank mmiri ka ị ghara ịma na ị nwere ike ịnweta mmiri ebe ọ bụla ị chọrọ ya, maka anyị, anyị nwere mmasị na obere ngwaọrụ ebe a, anyị mere ihe m kpọrọ chunky n'ezie ị nwere ike washingrụcha igwe kwụ otu ebe na-enweghị nnukwu anwansi wand ebe ị na-apụghị iru gị draịva, dịkwa mma ee ee, n'ihi na nke ahụ bụ mgbe niile otú ị na-eme ya s na-ahụ na olulu. Boysmụ nwoke ahụ nwere igwe kwụ otu ebe, o nwere ya ebe ahụ, mana mgbe ahụ ọ dị nnukwu ka nke a dị ka nke nnukwu ogologo amaghị m ee ee ọ dị oke ogologo nnukwu nke ị na-achọghị nnukwu anwansi wand nke ahụ bụ n'ezie ị maara ihe, na ụdị BillMarshall gosipụtara anyị ogologo oge gara aga ma mgbe ahụ anyị na-eme obere ọkụ ọkụ ọkụ 1700 psi n'ụzọ dị otú ahụ mgbe ndị ntorobịa anyị na-asacha igwe kwụ otu ebe ma na-afụ logos nke ihe niile nke mere na ọ dị mma ọ bụla dị mma nnukwu ka anyị hụ na ihe na eme oh oh mma ka m were ya iwe ya wee bia m na James site na TheDonnelly nke Volos cyclocross ihe m no ebe a na Gage Hex Bikes nwekwara ụfọdụ ihe ohuru ebe a ee ka ị na-agbago maka ọtụtụ oge anyị na-enweghị taya, nke bụ nnukwu ihe ọhụụ nye anyị ka anyị na-ahụ etu anyị si eme ọtụtụ taya taya ma nwee ezigbo ihe ịga nke ọma na taya taya anyị, mana anyị na-ahụ etu ọdịnihu ga-esi dị mma na ọ dị mfe maka ndị ọkachamara na ndị amateurs n'ihi na nwere ike ịgbanwe taya na wider, ọzọ oge a rim na ga-abụ n'ezie UCI iwu na ọ bụ a pụrụ nnọọ iche na-ewu. Ha maara TPI dị elu, anyị na-akpọ ya 240, mana ọ bụ obere ọrụaka karịa ụdị a iji mee ka ọ maa mma ma ka na-adịgide adịgide ma sie ike ị na-agba ya maka ọtụtụ oge ma merie ụfọdụ mmeri na Pan Am's Ruts and Guts and Nkume ụfọdụ agbụrụ ndị ọzọ na taya ndị ahụ na ọ ga-abụ na ha niile na-eme ha niile echi na-enwe obi ike na-enweghị mmetụta na taya na-enweghị ọdịiche dị n'etiti ha na ọkpọkọ nke m dị mma site na ihe ndị ọzọ dị jụụ anyị hụrụ ebe a bụ. stephen hydes national bike edition nwere igwe elekere 3d pụrụ iche nke elebere anya maka ọnọdụ na-apụta ebe a n'asọmpi mba na Washington na n'izu a, ha kpebiri na ha ga-eme onye nyocha nke 3d nke m bipụtara nke m Site na nke echiche, ọ bụ ihe siri ike na ọ bụ nzuzu ihe ị mac na nkà na ụzụ nke 3D ebi akwụkwọ ọkụkọ na mgbe ahụ nwere ike tinye ya ya anyịnya igwe anyị hụrụ otú o si mee pụrụ iche ibe n'ibe maka aero handlebars maka Pro Tour agba na TT anyịnya igwe, ma ugbu a, anyị ' re sta rting ịhụ na ọ na-abịa na onye nche a na acyclocross - otu n'ime ihe ndị ọzọ anyị hụrụ na igbe ebe a na nzuzo nzuzo kachasị elu 1:40 nke na-enweghị ike ịchọta SRAM rotors na-ekwu okwu na obodo bụ na ndị a na-azọ ụkwụ na ala na ọ bụghị n'elu n'ihi na o doro anya na ájá na apịtị na ajịrịja nkume na-eyi akwa mpe mpe ngwa ngwa herezọ dị ebe a na asọmpi mba dị ezigbo aja na oke aja na apịtị, yabụ ọ bụrụ na nke a zọọ na-enweghị oghere na rotor, pad nwere ike ịnwe ogologo oge ndụ, yabụ na anyị nwere ndị rotors ndị a na Ryanturbine na mbụ wee hụ ụfọdụ ụdị prototype ndị ọzọ nke ndị na-anya ụgbọ mmiri Stram, mana ugbu a anyị na-amalite ịhụ ha ka ha pụta ọzọ n'okpuru ọnọdụ ndị ọzọ na-adịghị ahụkebe n'ebe ahụ. Brenna Nke a bụ onye ọrụ Clara Haasesing nke otu.
Gịnị ka anyị na-eji igwe kwụ otu ebe a na Down na Rear Drill? leryeah, ya mere, anyị na-arụ ọrụ na Wheelmanufacturing, ụlọ ọrụ US maara nke ọma nke na-eme ọtụtụ akụkụ mmezi nke ụlọ ahịa na-arụkwa ọrụ nke ọma maka igwe kwụ otu ebe na-anọchi anya ntanye na Shimano ipigide ịke derailleur ya mere ọ ga - adị ka ugwu kwụ ọtọ - akpọ hanger . Ha na-eme udiri udi di iche maka ndi na-eme etiti. Ọ na-enye gị ohere inwe ọtụtụ ntụgharị na ngwugwu agbụ ka ị nwee ike ịgba ọsọ dị iche iche nke Shimano sterịn sistemụ na ee, naanị m hụrụ n'anya ị ga-efufu obere ihe na ngwaahịa derailleur gotityeah ọfụma ka ị nwee ike nwee mmasị na gravel griers ma ọ bụrụ ị nwere nnukwu cassette chọrọ ịrụ ọrụ na igwe kwụ otu ebe gị na-adịgide adịgide ka aluminom a na-eme ya bụ ve ry isiike n'ihi ya ọ na-ejide karịa ngwaahịa gị niile derailleur cool yeah right m nọ ebe a na Chris McGovern Chriswe just nwetara ụfọdụ toast ọhụrụ riednwale igwe kwụ otu ebe unu nwere ike ịgwa anyị ihe dị iche, kedụ ka ọ dị maka ndị tozuru etozu ụlọ ọrụ Jackalope dịka anyị nwere usoro atọ egosiri m ya na anyị nwere ala niile bụ ahexagonal, zụtara nke ọma, ọ bụ ụdị ọrụ ọrụ maka toast cut na mgbe ahụ anyị mere a pụrụ iche apịtị tost igwe kwụ otu ebe, ọ bụ a bit ogologo karịa m Ọtụtụ mkpuchi na mgbe ọ na-emecha na-ewepụghị na stof dị ka na .Ọ bụrụ na ị na-anụ ya na-egwu ala n'ọnụ gị na ị na-adịghị na-akwa ya. , o dika iro n, ma anyị mere ya nke igwe anaghị agba nchara, ha anaghị ada nká na ee, juggler na m mere ụzọ atọ ahụ ihe dị ka afọ abụọ gara aga, ugbu a, anyị bụ onye ọrụ aka gị nke sitere na Tobin Ortonblast ma ị mere nke a gbalịsie ike.
O jiri otutu ihe ndia mee otutu ihe, ee anyi nwere obi uto na ihe osise na akwa nkpuchi google ma anyi nweta CAD jockey iji nweta ya nke oma imara na m huru n'anya na i chere na oburu na i choro onye nzuzu 180 na-anọdụ ala otu akụkụ dị n'akụkụ ụkwụ, gịnị ka ị chere, olee otu ha si ejide ebe ahụ? Ọkụ na ụmụ nwoke ndị a, ha dị mma nke ukwuu Daalụ daalụ na nke ahụ bụ ngwakọta nke igbe ndị a na asọmpi mba ahụ Ka anyị mara ihe ị chere maka teknụzụ niile na nkwupụta ahụ, ka anyị mara na ị nọ maka kasị mma, ọ bụrụ na ị na-amasị isiokwu a, biko mee ka anyị mata ma ọ bụrụ na ị denyeghị aha site na ịpị ebe a n'etiti aka nri
Ebee ka m nwere ike ịgba okuko na Boulder?
Uzo okporo uzo uzo kacha mma nke 6 kacha mmaNkume
NCAR rịgoro. Ihe isi ike: Mfe.
Ezọ Olde Stage. Ihe isi ike: agafeghị oke.
Marshall Mesa. Ihe isi ike: agafeghị oke.
4. Lee Hill Road / Osimiri aka ekpe. Ihe isi ike: Ike.
Betasso Chebe. Ihe isi ike: agafeghị oke-ike (ọtụtụ maka igwe kwụ otu ebe)
Aha a na-asọpụrụ: Valmont Bike Park.
Ọnọdụ agba ahụ dị njọ, lelee ọnọdụ agbụ ya na onye na-agba ịnyịnya ígwè, ọ dị ka ọ ga-edochi agbụ ahụ, nke a bụ usoro kachasị sie ike ịchacha agba ahụ, ikpuchi ihe dị mkpa tupu eserese, nke mbụ ịkwesịrị iwepu griiz siri ike wepu Griiz na Basic, onye na-egbochi nchara na-adị ezigbo mkpa. Jiri egbe ikuku kpochapu onye na-eme ihe nchara. Mee tupu ị na-ese crank Mee mmanu tupu ị tinye iko isi ahụ. Mee elu viscosity lithium ọla kọpa Jiri igwe mpempe akwụkwọ. Wụnye ihe ntanetị ọhụrụ.
Vingga n'ihu na-arụ ọrụ nke ọma.
Ndi CU Boulder nwere ndi otu egwuregwu igwe?
CU cgba ígwèAlum Wiley Kaupus na-ekepụta ọdịnaya COVID na mgbọrọgwụMTB. Wiley Kaupus, yanaNwereAlumni Austin Hackett-Klaube,nweena DHigwe kwụ otu ebendị ọrụ nke Specialized akpọrọ Mgbọrọgwụ. Ha na eme ọdịnaya A + n’oge COVID, yabụ lelee vidio ha n’oge na-adịbeghị anyanwetaị hyped maka oge na-abịa abịa!
Anyị nọ na ngalaba kachasị ọhụrụ maka mmeri nke ụmụ akwụkwọ. Ebe etiti maka mmeri na agụmakwụkwọ.
Buildinglọ a nwere ụdị akụ dị iche iche maka ịga nke ọma nke ụmụ akwụkwọ gụnyere ụlọ ọrụ agụmakwụkwọ, anyị nwere ụlọ ọmụmụ yana ụlọ ọgbakọ maka ụmụ akwụkwọ. You ga-ahụ ihe niile ịchọrọ maka ịga nke ọma na agụmakwụkwọ gị ebe a. Otu n’ime ebe ndị kacha ewu ewu n’ụlọ a bụ na ụlọ nke anọ anyị.
Ọ bụ mbara ala nke anọ nke ihe oyiyi na-anọchite anya mascot anyị Ralphie. Anyị nwekwara echiche kachasị mma banyere Flatirons na Boulder na ọ dị mma ebe a n'ụlọ a na-eje ozi dị ka ọnụ ụzọ ámá nke ogige ahụ. Anyị nọ ugbu a na mpụga Center maka Community, abbreviated na C4C.
Ọ bụ otu n'ime ụlọ iri nri kachasị ukwuu na kampos, mana ọ bụghị naanị otu. Di na nwunye di iche iche enwere ike ichota na nke ahu bu ndi Italia, anyi nwere kosher station, ebe ndi Asia, Persian, ihe obula i nwere ike iche n’echiche ka a gha acho n’ime C4C. Na mgbakwunye na ụlọ iri nri na C4C, ụfọdụ ụlọ ọrụ dị mkpa ka nọkwa ebe a.
15 mgbatị ahụ dị elu
Anyị nwere ụlọ ọrụ na-amụ na mba ofesi, ụlọ ọrụ Buff OneCard, mgbe ị batara CU ị nweta Buff OneCard dị ka nke a. Ọ na-akpọrọ gị gaa n’ihe niile, n’ụlọ oriri na ọeterụ theụ, n’ebe obibi gị. Anyị nwekwara ọfịs Ọrụ Nlekọta Ọrụ.
Nke a bụ ụlọ ọrụ iji nyere gị aka ịmegharị ihe ị ga - eme, nweta ụlọ ọrụ ga - eme ka ị pụọ iche, ihe ọ bụla na - akwadebe gị maka ụwa n'ezie, wee nweta ọrụ ị rụrụ na Ketchum Hall, otu n'ime ọtụtụ ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ebe a na kampos. Anyị nọ n’obi otu klaasị, ị ga - ahụ na ọ pere mpe. 80% nke klaasị anyị bụ ụmụ akwụkwọ 50 ma ọ bụ obere na 50% nke klaasị anyị bụ ụmụ akwụkwọ 20 ma ọ bụ obere.
Anyi nwekwara recitations. Recitations ga-ewere ọnọdụ na mpụga nke klaasị gị ga - abụ ezigbo ụzọ dị mma maka ịme ihe ị na - amụta na nkuzi ahụ. Ọ bụ n'ezie a oké ụzọ na-arụ ọrụ na ihe ọhụrụ na-aza ajụjụ gị mgbe ị na-erughị ala na klas.
Na mgbakwunye, ndị prọfesọ anyị na-ejide oge ọrụ. Ọ bụ oge dị ezigbo mma ịbanye n'ime, jụọ ajụjụ ndị na-esochi, ma ọ bụ ikekwe ịmụtakwu ntakịrị ihe gbasara isiokwu ahụ wee banye n'ime isi nke gị. Yabụ ebe a ka anyị bi n'otu n'ime ọnụ ụlọ gị ọkọlọtọ na ebe obibi.
Mgbe ị na-achọ ụlọ, ị nwere ọtụtụ nhọrọ. Ekwadoro m akwado ịlele mmemme RAP na LLC. The dorm mmemme bụ mmemme n'ime nke ọ bụla dorm, ị na-ọmụmụ na gị dorm na nwere kpọmkwem ebe nke mmasị na-elekwasị anya.
Ha nwere Arts RAP na Libby, ha nwere Business RAP na CheyenneArapahoe. Otu esi eme nyocha dabere na mmasị gị. Ha na-enye nkuzi dị iche iche.
CU nwere usoro dị ukwuu iji gwa ndị gị na ha ga-abụ ndị ha na ha ga-ebi. Nwere ike mejupụta nyocha ndụ ndụ, otu esi adị ọcha, mgbe ị na-alakpu ụra, ma chọta ndị nwere ụdị ndụ na mmasị. O doro anya na ihe ị ga-atụle ebe ọ bụla ị bi ebe a na CU ga-abụ ezigbo oge iji soro ndị ị na-ahụ ebe a.
Nabata na CU Rec Center. Nke a bụ ebe kachasị amasị m na ogige CU Boulder. Enwere ọtụtụ ụzọ dị ukwuu iji tinye aka na otu dị iche iche na klọb dị iche iche na kampos.
N'agbanyeghị onye ị na-ezute na anyị campus, onye ọ bụla nwere a ahuhu maka ihe. Naanị m chọpụtara ịhụnanya m maka okike mgbe m bịara CU Rec Center. N'ebe a, anyị nwere mgbidi nkume atọ dị ịtụnanya nwere ihe karịrị 3,000 ejiri aka na-edogharị kwa izu abụọ.
Anyị nwekwara ụlọ ịgba egwuregwu tennis dị n’elu ụlọ, bọọlụ basketball isii na-ele otu n’ime echiche ndị ama ama na Boulder. N'ime ọdọ mmiri anyị, anyị na-akụzi yoga, nkwụnye mmiri na ọtụtụ usoro ọmụmụ ndị ọzọ gụnyere na CU Be Fit Pass. Ọtụtụ ọrụ egwuregwu na egwuregwu na-ezukọ ebe a.
Amalitere m n'egwuregwu intramural, esonyeere m otu egwuregwu na dorm m n'afọ ọhụrụ m na nke a nyere m mkpakọrịta chiri anya na kampos. Ulọ ọrụ CU Rec Center bụ naanị otu ihe atụ nke ọtụtụ nnukwu akụ anyị na-enye ụmụ akwụkwọ iji too ma zụlite ma chụsoo agụụ ha dị ka ndị mmadụ n'otu n'otu na mpụga ahụmịhe agụmakwụkwọ. Nabata na ubi Farrand.
Nke a bụ n'ezie otu ebe kachasị amasị m ebe a na kampos na CU Boulder. Ọ bụrụ n’ịleghachi azụ m, ị ga - ahụ ọhụhụ Flatirons. Nke a bụ otu ebe kachasị ewu ewu na kampos maka ụmụ akwụkwọ na ezinụlọ iji were onwe ha.
Ọ bụ n'ezie, dị ka m nụrụ, nke abụọ kasị nkịtị ebe ke Colorado. Anyi choro ikpo Ubi Farrand na azu nke afo mbu gi. Enwere ọtụtụ ụlọ obibi na gburugburu ebe a.
Yabụ iche n'echiche ịga n'ọnụ ụzọ ma nwee nnukwu ubi a ịnọ na oge gị n'efu na n'etiti klaasị. Anyị nwekwara ihe omume ole na ole na-eme ebe a, Welcome Fest na The Tas of CU, ha abụọ na-eme n'oge Welcomebọchị Izu Ike ebe a na CU Boulder. Anyị nwere ọtụtụ ụzọ iji kpọtụrụ ma nweta ike gị ebe a na CU, nke ahụ bụ otu n'ime ihe ndị mere m ji hụ Farrand Field n'anya ma ọ bụ otu n'ime ebe kachasị amasị m ịdọgbuo ebe a na kampos.
Lee anyị nọ na ama egwuregwu Folsom, ụlọ nke Colorado Buffaloes Football Team, na bọọlụ bụ n'ezie otu n'ime ahụmịhe kachasị ịtụnanya ị nwere na CU. Akụkụ niile nke kampos na-adị ndụ na egwuregwu bọọlụ ụbọchị na nke a bụ n'ezie ihe ụmụ akwụkwọ niile nwere ike isonye. N'abalị ahụ tupu egwuregwu bọọlụ, anyị na-abanye n'ime obodo Boulder ma mee ka ndị agha anyị na-eme njem na nnọkọ pep ogbe ndịda Pearl Street.
Nke a bụ ihe na - eme ka ụlọ akwụkwọ anyị dị n'otu na ọnụ ọgụgụ ndị gbara gburugburu ma na nke a pụtara n'ezie ihe ọ pụtara ịbụ CU Buffalo Football fan. Ralphie bụ ihe mascot anyị na-adị ndụ ma na-agbada ọdịnala kachasị mma na bọọlụ kọleji. Ọ na-agbaga n'ọhịa na mbido egwuregwu bọọlụ ọ bụla iji mee ka ndị agbụrụ ahụ pụọ n'oche ha wee banye n'egwuregwu bọọlụ ụlọ anyị.
Anyị nwere ngalaba ụmụ akwụkwọ dị ịtụnanya ebe a. A mụrụ ọtụtụ n'ime ndị enyi m ebe a maka oge mbụ n'ime afọ mbụ ha ma ọ bụ ebe a ka ị ga-abịa ma hụ ma zute ọtụtụ ndị mmadụ na egwuregwu bọọlụ CU anyị. Na mgbakwunye inwe ndị otu bọọlụ Division 1 Pac-12, anyị nwekwara basketball nke Division 1 maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị, na mgbakwunye nke volleyball, bọọlụ, na ọtụtụ egwuregwu ndị ọzọ a na-enyocha mba ha maka nka ha na ngalaba ha, nke na-esote anyị kwụsị na njegharị.
Ọ bụ nnukwu ọba akwụkwọ anyị na kọleji. O nwere otu akwụkwọ kachasị ukwuu na ọdịda anyanwụ nke Mississippi, yabụ anyị nwere ihu ọma inwe ikike ebe a na kampos. Cafe Cafe Caugh bụ otu n'ime ụlọ ahịa kọfị anyị nwere ebe a bụ ebe dị mma ị ga-aga n'abalị.
Akwụkwọ ndị Norlin nwekwara ọtụtụ ụlọ ọmụmụ ihe dị iche iche. Ime ụlọ ndị ahụ na-enwu gbaa, ha nwere igwe na-arụ ọrụ, igwe okwu na kọmputa. Ọ bụ nnukwu ebe ị ga-arụ ọrụ na ọrụ otu, ịnwere ike ibiri ha n'efu.
Norlin Quad, onye akpọrọ aha ya maka Norlin Library, bụ eleghị anya ebe kachasị amasị m ịga akwụkwọ dị ka nwa akwụkwọ. Yabụ ị nwere ike ịgwa ya na kwa ụbọchị dị mma, dị ka taa, ọtụtụ ụmụ akwụkwọ na-abịa ebe a, na-eme ihe omume ụlọ akwụkwọ, na-ezute ndị enyi, tụba frisbee ma ọ bụ bọọlụ. Oge opupu ihe ubi bu ihe kachasi nma nkem n’ihi na mgbe ihu igwe n’acha mma n’ihi ihe obula, n’akpali ndi mmadu ndi a elu ka ha puo obere anumanu, ha n’eweputa ha ebe a na quad, a na m agwa gi n’enweghi nsogbu. ị bụ obere nwa nkịta, ị nweghị ike ịhapụ ma gbazee n'ime ma ghọta na ndụ dị ezigbo mma.
Ọnụ okpu agha
Ya mere, anyị na-anọdụ ugbu a na Old Main, nke bụkwa ụlọ izizi ebe a na CU. Ọ bụ ụlọ mbụ ahụ mere ọ dị mma na ụlọ a ka dị ebe a ma anyị ka na-eji ya taa. N'azụ m bụ ihe ngosi Lego, nke ahụ bụ otu n'ime ihe mere m ji kpebie ịbịakwute CU.
M n'ezie na-amasị ihe nketa Center dị ka ọ na-egosi akụkụ nke ihe mere anyị bụ ndị anyị na-. N'ime Herlọ Ọrụ Hermitage a anyị nwere ihe ngosi oghere anyị. Anyị zigara ndị na-agụ kpakpando iri abụọ na NASA, nke bụ nke anọ na mba ahụ mgbe MIT, Purdue na Stanford gasịrị, nke dị oke egwu.
Fọdụ ihe ndị ọzọ dị jụụ mara na Old Main bụ ugwu. Ya mere nke a bụ n'ụzọ ije n'okporo ámá site na oche anyị. N'ebe ahụ ebe ụlọ Grik anyị niile nọ, yana ụlọ oriri na ọ hallụ otherụ ndị ọzọ, ụlọ egwu egwu mara mma a na-akpọ Fox, na ụlọ ezumike ụlọ.
Mmadụ Bịa ka UMC, makwaara dị ka University Memorial Center. Nke a bụ ụlọ akwụkwọ ụmụ akwụkwọ anyị kachasị ukwuu ebe a na kampos na nnukwu ebe ụmụ akwụkwọ hụrụ n'anya. UMC na-ejide CUSG anyị, nke bụ Ọchịchị Mmụta CU anyị.
Anyị mere Njikọ ahụ ebe a. The Njikọ bụ nanị Bowling uzo warawara na niile okwute, a n'ezie fun ebe-anọkọ na ndị enyi ma ọ bụ na-egwu Arcade egwuregwu. Anyị nwekwara ụlọ ahịa akwụkwọ.
Stlọ ahịa akwụkwọ ahụ bụ ezigbo ebe iji nweta CU swag na uwe ị nwere ike ịbụ CU buff kwesịrị ekwesị. N'ikpeazụ, anyị nwekwara ọtụtụ ụlọ nri ebe a. My kpam kpam mmasị bụ Alferd Packer imi ihe.
Nke a na-agba ọsọ site na mahadum ma kpọọ ya aha naanị onye na-eri anụ ikpe na steeti Colorado. Mụ onwe m chọtara obodo m ebe a ma enwere m olileanya na ị ga-eme, anyị nwere olileanya ịhụ gị ebe a na CU n'oge na-adịghị anya. Daalụ, ndị mmadụ!
Kedu oge dị mma iji gbaa okirikiri 20km?
Ihe dị ka 36 nkeji nkezi ga-abụ aezigbo ogen'ihi na onye na-amu amu onye na-agba. Nke ahụ ga - abụ 32 kph ma ọ bụ 20 mph nkezi ọsọ. Onye na-agba ịnyịnya ígwè nwere ike ịgba ya na nkeji iri abụọ ma ọ bụ karịa. Nke ahụ ga-abụ 48 kph ma ọ bụ 30 mph nkezi.
Kedu calorie ole anyị na-ere ọkụ mgbe anyị na-agba ịnyịnya ígwè? Ọ dị mma, anyị maara na ọ bụ nnukwu ụzọ iji felata, yabụ azịza ya dị nkenke mara mma. Ma olee otu anyi ga esi gbakọọ ya n'ezie? Isan̄a didie idiọn̄ọ? ọtụtụ carbohydrates anyị ga-eri ka anyị na-akwọ ụgbọala ka ike ghara ịgwụ anyị wee daa mgbidi ahụ? - Eeh. N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, kalori bụ otu nke ike.
Kalori nwere ihe oriri, ike ya nwere. Ikwu ya ọzọ, anyị nwere ike gbakọọ kpọmkwem ike ole ọ na-ewe iji wee gba otu ebe. (Funky music) - edgba ịnyịnya ígwè na-achọ ike.
Nke a tụrụ na watts. Can nwere ike iche na ịmepụta otu watt kwa awa na-ere calorie anọ. Ọ dịghị ada ụda dị ka nke ukwuu, mana ọ bụrụ na ị na-anya 10 mph otu elekere na okporo ụzọ dị larịị chọrọ ihe dị ka 40 watts. 15 kilomita otu awa ihe dị ka 100.
Na 20 kilomita otu awa n'okporo ụzọ dị larịị banyere 210 watts. Ya mere ịkwọ ụgbọala 10 kilomita n'ime otu awa chọrọ calorie 140. 15 kilomita na calorie 350 na 20 kilomita n'otu awa gbasara 700.
Knowingmara kpọmkwem calorie ole ị na-ere chọrọ chọrọ teknụzụ pụrụ iche. Nke ahụ na-apụtakarị mita ike dịka nke Matt na m na-eji agba ịnyịnya taa. Ha bụ ego dị oke mkpa, agbanyeghị, yabụ nke ọzọ bụ iji ụzọ dị larịị nye gị echiche na-ezighi ezi banyere ịrieụ calorie gị.
Agbanyeghị, ozigbo ị gbagoro, ma ọ bụ nwayọ ma ọ bụ n’ugwu, ma ọ bụ na ị nwere ọdụ siri ike ma ọ bụ nwee isi mkpuchi siri ike, ọ ga-adị iche. Kama nke ahụ, ị ​​nwere ike nweta echiche siri ike banyere etu obi gị dị - ee, nke a bụ usoro dị ogologo nke siri ike nke na-elebara afọ gị anya. Ibu ibu gị na ogologo oge ị gosipụtara.
Y’oburu n’itinye otutu obi nkpuru obi gi n’ime ihe ndi ahu, inwere ike ichu ezigbo echiche banyere kalori ole i siri kpo oku. - Iji nye gị ihe atụ, m dị afọ iri atọ na isii, m na-ebu kilogram 70 ma nweta nkezi nke ihe dịka 20 kilomita kwa elekere ma ọ bụ 210 watts na ụzọ dị larịị, maka mụ onwe m ọ na-achọ nkezi obi ọnụego banyere 140 Ogba kwa nkeji na 770 Calories Per Hour - Ya mere o doro anya na enwere ụfọdụ ezighi ezi ebe a. N'ezie, enwere ọtụtụ ezighi ezi n'ofe osisi na usoro ndị a niile.
Ma karie obi obi. Were, dịka ọmụmaatụ, iji mmadụ atụnyere onye nke ọzọ. Fọdụ ndị nwere ọnụego obi dị ala, tụlee onye ọzọ, mana nke ahụ agaghị emetụta ahụ ike ha n'ụzọ ọ bụla.
Ma na ị ga-elele anya nke obi gị. Enwere ike ịgbanwe ya dabere na ike gwụrụ gị ma ọ bụ ọbụlagodi ahụ gị, mana gịnị gbasara arụmọrụ? N'ezie nke ahụ na-egosi ihe mmadụ rụzuru n'ezie. Ọ dị mma, mana iji gbakọọ calorie site na arụmọrụ, enwere echiche banyere arụmọrụ gị.
Nke ahụ bụ, ole calorie ga-efu n'iwepụta ike a. Ihe kpatara nke a bụ naanị echiche bụ n'ihi na arụmọrụ ndị mmadụ dịgasị iche ruo ihe dịka 30. - Iji tinye ya na gburugburu ya, ọ bụ Nke a bụ ihe dị iche na mkpa nke calorie 850 maka elekere na 200 watts ma ọ bụ naanị calorie 600 nwere nnukwu gels atọ ọzọ, oge elekere ọ bụla.
Ugbu a, enwere ihe ikpeazụ na-eme ka ihe sikwuo ike. Mgbe ị rịturu na ịnyịnya ígwè gị, ị gaghị akwụsị ire calorie. Burn na-ere calorie naanị iji dịrị ndụ, mana ụdị mmega ahụ na-eme ka ike gwụ gị.
Mmetụta Ha na - eme ka ahụ gị na - erekwu calorie karịa ọbụlagodi mgbe ị na-ehi ụra. Nke a bụ n'ihi na mmega ahụ siri ike na-ebute mmebi ahụ ma chọọ ume iji rụkwaa ya. Nwere ike ịchọpụta na mgbatị ahụ na-emekwa ka ị na-agbanyekwu calorie na 24 na-esote.
Ma ọ bụrụ na nke ahụ bụ ihe ịchọrọ n'ezie, oge dị elu dị mkpa bụ ihe ịchọrọ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịlele ogo calorie ị na-ere mgbe ị na-agba ịnyịnya, ị kwesịrị ịmara ọnụọgụ na ụdị gas ndị ị na-ewepụta na mmekọrịta dị n’etiti oxygen na carbon dioxide. Ma dịka ị nwere ike iche n'echiche, nke a ga-achọ ụfọdụ ngwa ọrụ ọpụrụiche mara mma, nke a ga-eme na nyocha.
Ka anyi kwuo eziokwu. You nwere n'ezie ị ga-ekwu otu ihe ahụ? - Eleghị anya ọ bụghị, mana ịmara ole calorie ị na-ere mgbe ị na-agba ịnyịnya ga-enyere gị aka ịmata ole ị ga-eri ma ọ bụ ike ị ga-a drinkụ nke ị ga-a soụ ka ị ghara ịla n'iyi ka ị na-agba. N'ezie, ịkwọ ụgbọala nkeji 90 ọ bụla chọrọ ụfọdụ ụdị nri carbohydrate, ọbụlagodi na ebumnuche gị bụ ibubata ibu.
Ma ọ bụrụ na nke ahụ bụ ikpe, ọ na-egbochi caloric apụ na igwe kwụ otu ebe, nke ahụ ga-aka mma. - Ya mere, ị kwesịrị ịga rie achicha ụfọdụ? - Eeh. Agbanyeghị - Ọ bụrụ n’itinyebeghị ụtụ na Global Cycling Network, biko mee nke a ka ị ghara ịchefu akụkọ anyị ọ bụla.
Ma ị nwere ike ịme nke a site na ịpị ụwa - ee, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta nnukwu ike n'ime ụlọ, na onye na-enye gị ọzụzụ n'ime ụlọ, anyị nwere isiokwu zuru oke maka gị ala ebe ahụ. Ọ bụrụ na, n’aka nke ọzọ, ịchọrọ ịmata ebe ị ga-eri nri kachasị mma mgbe ịnyịnya ígwè ahụ, ị ​​nwere ike ịchọta ya ebe ahụ. - Ma n'ọnụ, ọ ga-abụ a kafe - Ee, n'ezie na igwe kwụ otu ebe - Oh. - Ọ dị mma.
Kedu ihe kacha mma maka ịgbago ugwu?
Mgbe olena-agbago ugwuma ọ bụ n'ime isi, ọ bụkacha mmaiji obere ma ọ bụ n'etiti n'ihu yinye na ibu n'azụ cogs. Mgbe olena-agba ịnyịnyadownhill, ọ bụkacha mmaiji nnukwu n'ihu yinye na a nso nke nta n'azụ cogs.Dec. 3 2020
Gini mere ndi ugwu ji ari nwayo na ulo?
Mmepụta ike na-ada kwa ala.
Mgbe ike gwụrụ nnukwu akwara gị, akwara ụkwụ gị, na ikpere gị tupu gị erute n'elu ugwu ahụ, ndị na-agba ịnyịnya ji nwayọọ nwayọọ na-egweri ụzọ ha gbagoro na nrịpụta ike ndị dị ala karịa ihe ha nwere ike ịkwagideewepụghịala.
Ogologo oge ole bụ uldzọ Boulder Creek?
Uldzọ Boulder Creekbụ 8.8 mile moderately traffised point-to-pointnzọ ụkwụdị nsoNkume, Colorado nke nwere osimiri ma dị mma maka ọkwa ọkwa niile. Ihenzọ ụkwụbụ isi eji eme njem, ịgba ọsọ, na ịgba ịnyịnya n'okporo ụzọ ma jiri ya mee ihe kachasị site na Machị ruo Ọktọba.
Ee,ịgba ígwè nwere ikeEnyemakaida abụba abụba, ma ọ ga-ewe oge. Nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya gosipụtara mgbe nileịgba ígwènwere ike ịkwalite n'ozuzuabụba ọnwụma kwalite ahụ ike. Ijibelatan'ozuzuafọgirth, agafeghị oke-ihe omume aerobic, dị kaịgba ígwè(ma ọ bụ n'ime ụlọ ma ọ bụ n'èzí), dị irè iji belataafọ abụba.02.02.2021
Ọtụtụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè nwere ike nweta 10-12Mphnkezingwa ngwana mmachi ọzụzụ. Ezigbo ahụmahụ, ọkara (kwuo 40 kilomita): nkezi gburugburu 16-19Mph. Ezigbo ndị na-agba ịnyịnya ịgba ọsọ, ụfọdụ ọzụzụ mgbe niile nwere ike ịbụ, ogologo ogologo (kwuo kilomita 50-60):iri abụọ-24Mph.
Gịnị mere ịgba ịnyịnya ígwè na ugwu ji sie ike?
Ngwa igwe ịgba ọsọ 7 ọ dị mma maka ugwu?
Ihe7-igwe kwụ otu ebeadabara maka ịnya n'elu ugwu di elu, na 21-igwe kwụ otu ebenke kachasị mma maka ịnya n'elu ala dị larịị. A7-igwe kwụ otu ebega-arụ ọrụ nke ọma mgbe ị na-agbago n'elu ala dị elu karịa 21-igwe kwụ otu eben'ihi na ị na-agba ịnyịnya n'elu ugwu, obereososoachọrọ ma nwekwuo ike ịnya elu ugwu.
Ọ dị mma ịgba igwe kwụ otu ebe na Boulder Colorado?
Boulder, Colorado dị mma maka ihe ọ bụla n'èzí, karịsịa ịgba ịnyịnya n'okporo ụzọ. Obodo a nwere omenaala ịgba ịnyịnya n'okporo ụzọ na-enweghị atụ na ọtụtụ obodo ndị ọzọ na North America. N'iji anwụ na-acha na afọ niile, ọ ga-esiri gị ike ịnọ otu ụbọchị na Boulder n'emeghị onye ọ bụla na igwe kwụ otu ebe - ee, ọbụna n'oge oyi!
Ogologo kilomita ole ka okporo ụzọ igwe kwụ otu ebe na Boulder?
Boulder bụ ebe pụrụ iche maka ndị ịnyịnya ígwè. Ndagwurugwu Boulder nwere ihe karịrị kilomita 300 nke igwe kwụ otu ebe, gụnyere kilomita 96 nke ụzọ igwe kwụ otu ebe, kilomita 84 nke ọtụtụ ụzọ eji eme ihe, na kilomita 50 nke ụzọ ụgbọ ala ahọpụtara. N'ihe karịrị ụbọchị 300 nke anwụ na-acha, na ọdịbendị na-arụ ọrụ nke na-azụlite ya, ịgba ịnyịnya ígwè bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma iji gafere Boulder.
Nwere ike ịtụ ahịa ịnyịnya ígwè na UK?
Enweghị iwu Boulder ịnyịnya ígwè ga-anabata maka mbupu United Kingdom nke dị n'okpuru $ 190 tupu mbufe. Ọ bụrụ n’itinye ụdịrị iwu ahụ, anyị ga-akagbu ya wee kwụghachi ụgwọ gị.